Horudhac: Fulham vs Manchester United… (Red Devils oo doonaysa inay waddada guusha dib ugu soo laabato kaddib barbarihii Anfield) – Gool FM
(London) 20 Jan 2021. Kooxda Manchester United ayaa hubin doonta inay ku guuleysan doonto kaalinta koowaad ee miiska kala sarreynta horyaalka Premier League marxaladda kalabarka xilli ciyaareedkooda marka ay caawa Fulham kula ciyaarayaan garoonka Craven Cottage.
Red Devils ayaa barbaro goolal la’aan ah garoonka Anfield kula soo gashay kooxda horyaalka difaacanaysa sanadkan ee Liverpool habeenkii Axadda, waxaana ay wajihi doonaan caawa kooxda Fulham oo aan wax guul ah gaarin horyaalka Premier League tan iyo bishii November.
Fulham ayaa ku faraxsan soo laabashada Aleksandar Mitrovic kaddib dhaawac muruqa ah oo uu la maqnaa iyo Ruben Loftus-Cheek, kaasoo aan ciyaarin kooxda isbuucii hore.
Si kastaba ha noqotee, Bobby Decordova-Reid iyo Antonee Robinson ayaa labaduba ganaax ku seegaya kulankan, halka Terence Kongolo uu sii joogteyn doono maqnaanshihiisa dhaawac.
Tababaraha Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa laga yaabaa inuu doorto inuu shaxdiisa ka bedelo Harry Maguire, Luke Shaw iyo Bruno Fernandes kuwaasoo dhammaantood min hal jaale u jira in la ganaaxo.
The Red Devils ayaa weli waxaa ka maqnaanaya kulankan Brandon Williams iyo Phil Jones.
>- Fulham ayaa kaliya qaadatay labo dhibcood 11-keedii kulan ee la soo dhaafay horyaalka oo ay wajahaday Man Utd, iyagoo barbaro galay labo jeer, isla markaana guuldarro la kulmay sagaal jeer.
>- Manchester United ayaa guuleystay afar kulan oo xiriir ah horyaalka oo ay booqatay garoonka ay caawa ku ciyaareyso ee Craven Cottage, iyadoo cel-celis ahaan mudadaad dhalisay 12-1.
>- Fulham ayaa guushii ugu dambeysay oo ay garoonkeeda kaga gaarto Man United, waxay ahayd ciyaar ku dhammaatay 3-0 oo dhacday bishii December ee sanadkii 2009.
>- Fulham ayaa guul la’aan ah todobo kulan oo horyaalka ah, iyadoo barbaro gashay shan kulan, isla markaana laga adkaaday labo kulan.
>- Cottagers ayaa dhalisay kaliya saddex gool oo horyaalka Premier League 11-keedii saacadood iyo labadeedii daqiiqo ee la soo dhaafay.
>- Kooxda uu hoggaamiyo Scott Parker ayaa halis ugu jirta inay ku guuldarreysato inu gool dhaliso afar kulan oo xiriir ah oo ay horyaalka ku ciyaareyso garoonkeeda markii ugu horreysay tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii 1969-kii.
>- Waxa ay kaliya qaateen lix dhibcood 27-dhibcood oo ay ka heli kareen kooxaha markaas ku jirta 10-ka sare ee horyaalka Premier League.
>- Fulham ayaa guul la’aan ah 32 kulan oo Premier League ay ku wajaheen lixda kooxood ee ugu sarreeya iyagoo barbaro galay saddex kulan, isla markaana guuldarreystay 29 kulan.
>- Ademola Lookman ayaa gacan ka geystay afar ka mid ah lixdii gool ee la soo dhaafay oo ay horyaalka ka dhalisay Kooxda Fulham, waxa uu dhaliyey hal gool isagoo caawiye ka ahaa saddex kale.
>- Manchester United ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey tan iyo markii ay Arsenal guuldarro kala kulantay 01 bishii November.
>- Waxaa u buuxsan tahay sanad tan iyo guuldaradoodii ugu dambeysay ee ay ku soo qaataan bannaanka kulammada horyaalka, markaasna waxaa 2-0 ku soo garaacday Liverpool 19-kii Janaayo sanadkii hore ee 2020.
>- Red Devils ayaa 12 dhibcood ka fiican marka loo eego sida ay ku sugan tahay heerkaan oo kale xilli ciyaareedkii hore.
>- Wiilasha Tababare Ole Gunnar Solsjkaer ayaa shabaqooda gool ka ilaashaday labo kulan oo horyaalka ah safarradoodii fasal ciyaareedkan 2020-21.
>- Man United ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten), siddeedoodii kulan ee la soo dhaafay oo ay horyaalka ku wajaheen kooxaha u soo dalacay hroyaalka, waxaana ay ka dhaliyeen 25 gool.
>- Solskjaer ayaan laga badinin dhammaan siddeedii kulan ee uu la ciyaaray, isagoo ciyaaryahan ah Scott Parker, wuxuu badiyay lix kulan, labana barbaro ayuu galay.